Vokatry ny pôrnôgrafia | Reward Foundation
Home fahasalamana Vokatry ny fialam-boly
Tanora maro no mahita ny pôrnôgrafia ho toy ny boky fampianarana, loharanom-hevitra momba ny tontolon'ny firaisana ara-nofo ho an'ny olon-dehibe. Mampalahelo fa ireo tranonkala vetaveta dia tsy misy fampitandremana momba ny risika na ny fahavoazana. Manandratra ny tenany ho toy ny famatsiana fahafinaretana sy fialamboly tsy misy farany izy ireo. Toy ny zavatra mety mampiady saina sy fitondran-tena rehetra, ny pôrnôgrafia dia mety hiteraka fanovana lehibe eo amin'ny ati-doha rehefa ela ny ela ary hampirisika ny fihetsika manimba ny faritra hafa amin'ny vatana. Ny fihinanan-kena tsy mahafaty na 'filalaovana an'habakabaka' araka ny iantsoan'ny indostrian'ny pôrnôgrafia azy ho ehemimia, dia ohatra iray izay miha-mahazo vahana ankehitriny. Jereo ity bilaogy eo amboniny.
Ny fiovana ara-batana mampatahotra indrindra izay nambaran'ny lehilahy, indrindra ny lehilahy latsaky ny 40 andro ankehitriny amin'ny ankamaroan'ny toerana fanarenana, dia ny erectile (ED). Izany hoe tsy afaka mahazo filahiana henjana na mahitsy izy ireo. jereo ity fampisehoana ao amin'ny ED ity hahatakatra ny antony. Ho an'ny sasany, ny ejaculation tara na ny valin-teny kamo amin'ny tena mpiara-miasa dia mahazatra. Mariho fa tsy miaina ny ED izy ireo rehefa mampiasa pôrnôgrafia, raha tsy rehefa manandrana manao firaisana amin'ny tena sakaiza izy ireo. Midika izany fa maro ny lehilahy tsy misy mpiara-miasa akory no tsy mahatsapa akory fa niteraka olana erectile izy ireo.
Araka ny nolazain'ny mpikaroka mpikaroka ao amin'ny University of Cambridge, Valerie Voon:
“Ireo [mpidoroka sary vetaveta] raha oharina amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo mahasalama dia nanana fahasahiranana bebe kokoa tamin'ny filana ara-nofo ary niaina zava-tsarotra erectile bebe kokoa tamin'ny firaisana ara-nofo akaiky fa tsy amin'ny zavatra mamoa fady.”
Mety hiteraka olana lehibe izany rehefa mivady ny mpivady. Na ny mpiara-miombon'antoka dia mety hahatsapa ho tsy ampy amin'ny tsy fahafahany manao firaisana ara-nofo na toa tsy afaka mitaky faniriana hanao firaisana amin'ny olon-kafa. Nahatonga lehilahy maro ho henatra sy henatra ary fahasosorana na fahatsapana tsy fahombiazan'ny mpiara-miasa aminy izany.
Jereo tsara ity lahatsoratra avy amin'ny The Guardian antsoina hoe "Manan-kery ve ny fanaovana sary vetaveta ny zatovolahy?"
Ohatra, tovolahy iray avy amin'ny vondrom-piarahamonina nentim-paharazana izay nijanona ho virjiny mandra-panambadian'izy ireo dia nampiasa sary vetaveta ho solony. Rehefa nanandrana nanantanteraka ny fanambadiana izy mivady dia tsy afaka nanao firaisana. Izany dia nijanona nandritra ny roa taona satria tsy nampifandraisiny ny pôrnôgrafia tamin'ny tsy fahampian'ny firaisana ara-nofo. Tamin'io fotoana io dia nilaza ny vadiny fa te hisaraka izy. Sendra ilay tovolahy vao nahita an'i Gary Wilson TEDx talk, hitany ve fa ny fampiasana sary vetaveta lava dia mety hitarika amin'ny tsy fahombiazan'ny erectile. Manantena izahay fa ny vadiny hampitsahatra ny fizotry ny fisaraham-panambadiana satria aretina azo sitranina io. Firy ny fanambadiana sy ny fifandraisana no voan'ny pornographique amin'ny Internet?
Ny vaovao tsara dia rehefa miala amin'ny pôrnôn'ny Internet vetivety ireo lehilahy dia azo averina amin'ny laoniny ny fiasan'izy ireo. Mety maharitra amam-bolana na an-taonany aza amin'ny tranga maditra sasany. Mahagaga fa mitaky fotoana bebe kokoa amin'ny tovolahy vao sitrana ny "mojo" noho ny lehilahy lehibe. Izany dia satria ny anti-dahy dia nanomboka ny asan'izy ireo tamin'ny filalaovana horonantsary sy sarimihetsika ary ny fijerena sary vetaveta dia matetika tsy nahery vaika ary notohanana ampy hamoronana ny lalina fitondran-tena ary ny lalana izay mamorona sary vetaveta amin'ny Internet. Ny zatovolahy dia miara-miasa amin'ny pôrnôgrafia sy ny filokana miadana mandritra ny fotoana lava be fa tsy mampiasa ny fisainany, ny fomba taloha.
Ireto misy fikarohana sasany:
• Italia 2013: 17-40 taona, marary tanora kokoa noho ny tsy fahombiazan'ny erectile (49%) mihoatra ny zokiny (40%) Misy ny fandinihana feno Eto.
• Etazonia 2014: 16-21 taona, 54% ny olana ara-nofo; 27% Erectile Dysfunction; Olana 24% amin'ny orgasme. Misy famintinana ny fikarohana Eto.
• UK 2013: ny fahadimy tamin'ireo zazalahy 16-20 dia nilaza tamin'ny University of East London fa "miankina amin'ny pôrnôgrafia ho famporisihana ny fanaovana firaisana ara-nofo izy ireo" Misy lahatsoratra an-gazety momba an'io Eto.
• Ao anatin'ny Cambridge University fianarana amin'ny 2014, salanisa taona 25, fa 11 amin'ny 19 no nilaza fa ny fampiasana sary vetaveta dia nahatonga ny libido ED / fihenan'ny mpiara-miasa, fa tsy tamin'ny pôrnôgrafia.
Ny pôrnôgrafia dia mety hisy fiantraikany amin'ny dinamika ara-batana amin'ny firaisana ara-nofo
Taorinan'ny fanatsarana ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy am-polotaona am-polony taona maro, maro ny porofo vao haingana fa misy lehilahy lasa manjakazaka sy mahery setra, indrindra amin'ny firaisana ara-nofo. Ity fihetsika tsy ilaina ity dia toa entina amin'ny ambaratonga sasany amin'ny fanjifan'ny lehilahy sary vetaveta amin'ny Internet.
A 2010 fianarana amin'ny atin'ny DVD be mpividy indrindra dia hita fa tamin'ireo seho 304 nohadihadiana, 88.2% no nahitana herisetra ara-batana, famelezana, fidonana ary fikapohana am-pitoerana, raha 48.7% ny seho dia nahitana herisetra am-bava, fiantsoana anarana. Matetika lahy ny mpanohitra ny herisetra, ny vehivavy kosa lasibatra amin'ny herisetra. Ny tanjona matetika matetika dia nampiseho fahafinaretana na namaly tsy miandany ny herisetra.
Ny fananganana an'ity fikarohana ity dia fanadihadiana alemanina vao navoaka izay nahitana fa ireo lehilahy izay nandray anjara tamin'ny sehatra lehibe indrindra ary ara-nofo Ny fihetsika manery dia ireo izay mihinana sary vetaveta matetika ary misotro toaka matetika alohan'ny na mandritra ny firaisana.
izany fianarana nanadihady ny fahalianan'ny lehilahy heterosexuel lahy sy ny firosoana amina karazana fitondran-tena mibaribary hita tamin'ny fanadihadiana momba ny sary vetaveta tato ho ato. Ny fahalianana amin'ny fijerena sary mihetsika mamoafady malaza na fanjifana sary vetaveta matetika dia mifandraika amin'ny fanirian'ny lehilahy hirotsaka na efa nanao fihetsika toy ny fisarihana volo, kapoka mafy ny mpiara-miasa mba hamela marika, ejaculation amin'ny tarehy, fitanana, fidiranana indroa ( izany hoe miditra an-doha amin'ny vodin'ny vodilanitra na ny fivaviana miaraka amina lehilahy hafa), vava vava (izany hoe miditra an-tsokosoko amin'ny vady ary avy eo nampiditra mivantana ny filahiana tao am-bavany), nibontsina ny penina, nikapoka ny tarehy, kenda ary niantso anarana (oh: slut "na" janga "). Mifanaraka amin'ny fikarohana andrana taloha momba ny vokatry ny alikaola sy ny fijerena sary vetaveta ny mety hisian'ny fanerena ara-nofo ataon'ny lehilahy, ireo lehilahy izay nanao fihetsika natanjaka indrindra dia ireo izay matetika nihinana sary vetaveta ary nisotro toaka matetika talohan'ny na nandritra ny firaisana.
Firaisana ara-nofo sy fitondran-tena mahery setra hafa
Betsaka ny porofo manamarina fa ny pôrnôgrafia dia natao hanehoana hetsika izay tena manentana ny maso, toy ny firaisana amin'ny vava, ny fidirana an-tsokosoko na ny ejaculation amin'ny tarehy. Na izany aza, ny mpanakanto dia karamaina na terena hanao zavatra izay tsy azon'izy ireo atao amin'ny safidy. Kintan'ny pôrnôgrafia vehivavy maro no naondrana an-tsokosoko tamin'ny sehatry ny pôrnôgrafia.
Ny pôrnôn'ny Internet amin'ny ankapobeny dia atao amin'ny tontolo tsy voafehy. Mampiseho hetsika matetika mety hampidi-doza amin'ny fahasalamana izany. Ohatra, be mpampiasa ny "barebacking", izany hoe firaisana ara-nofo, matetika firaisana ara-nofo, tsy misy kapaoty. Ny fampiasana fimailo dia mahatonga ny firaisana ara-nofo aseho tsy dia tena izy ary misy fiatraikany ambany amin'ny fahitana. Amin'ny fisorohana ny fimailo dia afaka mampiseho ny fifanakalozana tsiranoka betsaka amin'ny vatana ny mpanao pôrnôgrafia, asongadino ny 'firaisana ara-nofo mafana indrindra' ary asehoy ho anao ny safidy farany mahaliana indrindra amin'ny fiainanao firaisana.
Ireo mpitsabo ara-pahasalamana sy ara-pananahana dia manome soso-kevitra ny amin'ny mpiara-miombon'antoka vaovao mba hojerena amin'izay misy azy ireo - mety ho loharanon'ny aretina azo avy amin'ny firaisana, anisan'izany ny VIH / SIDA. Ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny tena sakaiza dia zavatra mety hampidi-doza. Anjaranao sy ny namanao no mitantana ny haavon'ny risika.
<< Vokatry ny saina Adin-tsaina >>